Iindaba - Iindlela zonyango lwasendaweni zokutenxa kwebhanti lokuhambisa
Iindlela zonyango kwindawo yesiza yokutenxa kwebhanti lokuhambisa
1. Ngokobungakanani bevolthi yothutho, yahlulwe yazi: B500 B600 B650 B800 B1000 B1200 Iimodeli ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ezinje ngeB1400 (B imele ububanzi, ngeemilimitha). Okwangoku, amandla emveliso amakhulu e-B2200mm ibhanti yokuhambisa.
2. Ngokokusetyenziswa kwendalo eyahlukileyo, yahlulwe yabhanti yokuhambisa irabha yesiqhelo, ibhanti yokuhambisa irabha engenabushushu, ibhanti yokuhambisa irabha enganyangekiyo, i-asidi kunye nebhanti yokuhambisa irabha enganyangekiyo, ibhanti yokuhambisa irabha enganyangekiyo, ibhanti yokuhambisa irabha kunye ezinye iimodeli. Ubuncinci bokuqina kwerabha yokugquma kumabhanti okuhambisa irabha aqhelekileyo kunye neebhanti zokuhambisa ukutya yi-3.0mm, kwaye ubukhulu obuncinci beerabha esezantsi ye-1.5mm; iibhanti zokuhambisa irabha ezinganyangekiyo ngobushushu, iibhanti zokuhambisa irabha ezinganyangekiyo, i-asidi kunye neebalki zokuhambisa irabha ezinganyangekiyo, neebhanti zokuhambisa irabha ezinganyangekiyo. Ubuncinci bobukhulu beglu yi-4.5mm, kwaye ubukhulu obuncinci beqweqwe elisezantsi yi-2.0mm. Ngokweemeko ezithile zokusetyenziswa kwendawo, ubukhulu be-1.5mm bunokusetyenziselwa ukwandisa ubomi benkonzo yerabha ephezulu kunye nezantsi.
3. Ngokwamandla aqine ebhanti lokuhambisa, linokwahlulwa libe yibhanti yokuhambisa esemgangathweni kunye nebhanti yokuhambisa enamandla. Ibhanti yokuhambisa ngelaphu enamandla yahlulwe yabhanti yokuhambisa ye-nylon (ibhanti yokuhambisa ye-NN) kunye nebhanti ye-polyester yokuhambisa (ibhanti yokuhambisa ye-EP).
2. Iindlela zonyango ezisesizeni zokutenxa kwebhanti lokuhambisa
(1) Uhlengahlengiso lokuhamba ngokuthe ngcembe lokurhuqa ngokuzenzekelayo: Xa uluhlu lokuphambuka kwebhanti lokuhambisa lingenkulu, i-roller-drag-roller roller ingafakwa xa kuthelekiswa nebhanti yokuhambisa.
(2) Ukuqiniswa okufanelekileyo kunye nokulungelelaniswa kokuphambuka: Xa ibhanti yokuhambisa iphambuka ukusuka ngasekhohlo iye ngasekunene, kwaye icala lihamba ngendlela engaqhelekanga, oko kuthetha ukuba ibhanti lokuhambisa likhululekile kakhulu. Isixhobo esinoxinzelelo sinokulungiswa ngokufanelekileyo ukuphelisa ukuphambuka.
(3) Uhlengahlengiso lwethambeka lokujikeleza ngokuthe nkqo kwicala elinye: Ibhanti yokuhambisa isoloko iphambuka kwicala elinye, kwaye iiroli ezinokuma ngokuthe nkqo zinokufakwa kuluhlu lokuseta kwakhona ibhanti.
(4) Lungisa ukutenxa kwe-roller: ibhanti lokuhambisa libaleka kwisondo, jonga ukuba ngaba i-roller ayiqhelekanga okanye iyahamba, hlengisa i-roller kwindawo ethe tyaba kwaye ujikeleze ngesiqhelo ukuphelisa ukuphambuka.
(5) Lungisa ukuphambuka kwendibaniselwano yebhanti yokuthutha; Ibhanti lokuhambisa lihlala lihamba kwicala elinye, kwaye ukuphambuka okuphezulu kukudibeneyo. Ukudityaniswa kwebhanti yokuhambisa kunye nomgca osembindini webhanti yokuhambisa kunokulungiswa ukuze kupheliswe ukuphambuka.
(6) Ukulungisa ukuphambuka kweroli yokurhuqa ephakanyisiweyo: ibhanti lokuhambisa linendlela ethile yokutenxa kunye nomgama, kwaye amaqela aliqela okurhuqa iiroller anokuphakanyiswa kwelinye icala lendlela yokutenxa ukuphelisa ukuphambuka.
(7) Lungisa ukuphambuka kwesondo elirhuqayo: icala lokuphambuka kwebhanti lokuhambisa liqinisekile, kwaye uhlolo lufumanisa ukuba umgca osembindini wokurhuqa awuthathi ngqo kumgca wombindi webhanti lokuhambisa, kwaye iroli yokutsala inakho uhlengahlengiso ukuphelisa ukuphambuka.
(8) Ukupheliswa kokuncamathiselwa: indawo yokuphambuka yebhanti yokuhambisa ihlala ingatshintshanga. Ukuba kufumaneke izincamathiselo kwiisondo ezigudlukayo nakwigubu, ukuphambuka kufuneka kususwe emva kokususwa.
(9) Ukulungisa ukuphambuka kwesondlo: itheyiphu ayiphambuki phantsi komthwalo omncinci, kwaye ayiphambuki phantsi komthwalo onzima. Ubunzima feed kunye nendawo zinokuhlengahlengiswa ukuphelisa ukuphambuka.
(10) Ukulungisa ukuphambuka kwesibiyeli: icala lokuphambuka kwebhanti lokuhambisa, indawo igxothiwe, kwaye ukuphambuka kubaluleke kakhulu. Inqanaba kunye nokuma nkqo kwebrakethi kunokuhlengahlengiswa ukuphelisa ukuphambuka.